Te Reo Māori/mi/domestictungsten.html
 » သတင်း
ပစ်မှတ်ပစ္စည်းသည်အသုံးချနိုင်မှုကျယ်ပြန့်ပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်လူများစွာ၏အာရုံစိုက်မှုကိုရခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားအများစုအတွက်ဖြစ်သည်, ၏သဘောတရား “ပစ်မှတ်” မည်သို့ပင်ဖြစ်စေအတော်ပင်ရင်းနှီးသောသူဖြစ်သည်, photovoltaic ဆဲလ်များအပါအ ၀ င်စက်မှုလုပ်ငန်းများ, flat panel display များ, အကြီးစားပေါင်းစပ်ဆားကစ်များ, အသေးစားလျှပ်စစ်ပစ္စည်း, အလှဆင်အင်္ကျီများအားလုံးအများအပြားလိုအပ်သည် “ပစ်မှတ်များ”.ကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိချွဲပစ်မှတ်များဝယ်လိုအားအများဆုံးနိုင်ငံများအနက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်.
ဒါပေမယ့်, သ, သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်မှု, သိပ်သည်းဆမြင့်မားသည်, ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကြီးမားသော tungsten-titanium အလွိုင်းပစ်မှတ်များကိုဂျပန်ကဲ့သို့နိုင်ငံအနည်းငယ်တွင်သာထုတ်လုပ်နိုင်သည်, ဂျာမနီ, နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု. ငါ့နိုင်ငံတွင်သုံးသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ပစ်မှတ်များစွာကိုတင်သွင်းရန်လိုသေးသည်။.
Foshan Jushitai အမှုန့်သတ္တုဗေဒ Co., လီမိတက်, မူလကရိုးရာ hardware ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခဲ့သည်, ငါ့တိုင်းပြည်နဲ့ဒီစျေးကွက်ရဲ့အလားအလာကိုမြင်တယ် “အားနည်းချက်” ၎င်း၏ပြည်တွင်းမိတ်ဖက်များ. စ၍ 2006, ၎င်းသည် Shenyang သတ္တုသုတေသနဌာနနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်, တရုတ်သိပ္ပံအကယ်ဒမီ, နှင့်ထက်ပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည် 2,000 ယွမ် 10,000 သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် “အဆင့်မြင့်ပစ်မှတ်များ”.၌ 2009, ကုမ္ပဏီသည်အစားထိုးမရနိုင်သောအလွန်အစွမ်းထက်သောဂုဏ်သတ္တိများအစီအရီဖြင့် tungsten-titanium alloy coating coating ပစ်မှတ်ကိုအောင်မြင်စွာတီထွင်နိုင်ခဲ့သည်။, သိပ်သည်းဆမြင့်မားသည်, သန့်ရှင်းမြင့်မားသောသန့်စင်သော tungsten-titanium အလွိုင်းပစ်မှတ်ပစ္စည်းကို၎င်းမှထုတ်လုပ်ပြီးထုတ်လုပ်သော ion sputtering coating ပစ်မှတ်အမျိုးအစားအသစ်ဖြစ်သည်။, ပြသမျက်နှာပြင်၏အတားအဆီးအလွှာ (သို့) အရောင်အလွှာတွင်တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်, မှတ်စုစာအုပ်ကွန်ပျူတာ၏အလှဆင်အလွှာ, နှင့်ဘက်ထရီထုပ်ပိုး, စသည်တို့သည်ထုတ်ကုန်သည်အမေရိကန်နိုင်ငံ၏တရားဝင်စစ်ဆေးမှုကိုကျော်လွန်ပြီးဖြစ်သည်, နှင့်၎င်း၏အဓိကနည်းပညာညွှန်ကိန်းများသည်အခြေခံအားဖြင့်ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များကိုပြည့်မီခဲ့သည်, နှင့်ပစ်မှတ်သိပ်သည်းဆကိုရောက်ပါပြီ 99% သီအိုရီသိပ်သည်းဆ၏ ၉.၉%, သန့်ရှင်းမှုသို့ရောက်သည် 99.99%, ပစ်မှတ်သိပ်သည်းဆသည်နိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်အဆင့်သို့ရောက်နေပြီ, ငါ့နိုင်ငံရဲ့ကွာဟချက်ကိုအောင်မြင်စွာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်.
အကြို: ပစ်မှတ် sputtering ပစ်မှတ်အလတ်စားကြိမ်နှုန်း magnetron sputtering ၏အသိပညာကိုရှင်းပြပါ
နောက်တစ်ခု: sputtering ပစ်မှတ် detitanium agent ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရှင်းပြပါ